Bengladesh: Ny Dia Lavitra Natao Tamin’ny Fakanà Sary Niaraka Tamin’ny Bilaogera Fanta-daza GMB Akash · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2012 6:12 GMT
Lasa tokoa mantsy ny fotoana nahitàna ny vaovao iraisam-pirenena avy ao Bengladesh feno fifangaroanà sary misy ny korontana politika sy ny loza voajanahary. Misaotra an'ireo tanora manan-talenta vao manomboka sy ireo izay efa matihanina amin'ny fakàna sary fa hahita sary an'arivony momba an'i Bengladesh ianareo ao amin'ny aterineto, indrindra indrindra ao amin'ny tranonkala mpanaparitaka sary toy ny Flickr sy Picasa, izay mampiseho an'i Bengladesh amin'ny endriny maro hafa. Misy ihany koa mpamaham-bolongana an-tsary maro vao misondrotra avy ao Bangladesh izay manely ny sangan'asany sy ny sariny fanadihadiana.
Tiako hampahafantarina anareo ny asanà mpaka sary ary bilaogera iray izay tena nanaitra ny maro tokoa tamin'ny fampahafantarana an'i Bengladesh teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny taona 1996 no nitsiry tao amin'i GMB Akash ny fankafizana ny fakàna sary. Nanatrika ny World Press Photo seminar tao an-drenivohir'i Dhaka izy nandritra ny 3 taona ary nahazo ny mari-pahaizana tao Pathshala, izay Ivontoerana Momba ny Fakàna Sary Any Azia Atsimo ao Dhaka.
Nahazo loka iraisam-pirenena maherin'ny 40 isa avy amin'ny firenena maneran-tany izy ary ny asany dia nasongadina taminà vaovao iraisam-pirenena sy haino aman-jery mihoatran'ny 50 isa. Ao anatin'ny loka azony dia misy ny World Press Photo award (2006) ary ny International Travel photographer of the year award (2009). Vakio ny fanadihadiana ao amin'ny Tiffinbox raha te hahalala bebe kokoa ny aminy ianao.
Anisan'ny asa mendrika nataony ny sarin'ny Hijras (teraka ho lehilahy saingy manana ny mari-pamantarana ho toy ny vehivavy). Sasan-tsasany tamin'ny ampahany tao amin'nylahatsorany momba an'i Hijras:
Ny photoblog-ny dia feno tantara mampalahelo, fijaliana, hafaliana sy fanantenan'ny olon-tsotra ao Bengladesh. Ao amin'ny sary fanadihadiana “nateraka ny hiasa” dia milaza ny heviny momba ny raharaha fampiasàna ny zaza izy:
Raha ny resadresaka TEDx nataony tao Portugal tamin'ny TEDxO'Porto 2011 no jerena izay niresadresahany momba ny tetikasa lavitr'ezaka hataony, ny ‘Survivors’ manolotra fahafantarana lalina dia lalina momba ny dingana arahana sy ny faharisihana ao ambadiky ny asa tahàka itony. Survivors: “The invincibility of human determination to struggle and survive against all odds” na “Ny faharisihan'ny olombelona hiezaka sy hanavotra ny ainy manoloana ny sàkana rehetra” dia boky avy ao amin'ny Galleria di Porta Pepice of the photographs nataon'i GMB Akash.
Azonao arahana i GMB Akash ao amin'ny Tranonkalany, bilaoginy, Facebook, Flickr ary ny kaonty Twitter.